Rosiana Mpanao Politika Maniry Hanenjika Mpanao Gazety Namoaka Lahatsary Ahitàna Azy Manao Dihin’i Ricky Martin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2016 7:58 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Deutsch, русский, srpski, Español, English
Konstantin Fedotov, mpanolotsaina ao an-tanànan'i Orlov, mitingintingina sy mankafy funky. Lahatsary : YouTube
Nametraka fitoriana tany amin'ny polisy ny lehilahy iray mpanolontsain'ny tanàna ao Orlov, nitoriany mpanao gazety nizara ny lahatsary ahitàna azy manao ny dihin'i Ricky Martin “Livin la Vida Loca,” hoy ny tatitry ny tranonkalam-baovao TJournal.
Konstantin Fedotov, mpikambana iray avy amin'ny antoko Rosia Miray mitondra ny firenena, dia nangataka ny mpampanoa lalàna mba hanenjika ny mpamoaka vaovao Orlov News sy ny Oryolgrad, izay nitatitra fety iray natrehan'i Fedotov tao amin'ny birao tsy ela akory izay. Lazain'ilay lehilahy mpanolotsaina fa manohintohina ny fiainany manokana ilay lahatsary. Raha tsaraina amin'ilay lahatsary, toa mety ho mamomamo ihany koa i Fedotov tao amin'ilay fety.
Efa namaly sahady ny fampiantsoan'ny polisy napetrak'i Fedotov ny masoivohom-baovao Oryolgrad, tamin'ny filazàna fa tsy tomponandraikitra tamin'ny famoahana ilay lahatsary ao amin'ny Youtube. Isisihan'ilay masoivohom-baovao ihany koa ny filazàna fa tsy misy zavatra manala baràka raha ny momba ilay lahatsary:
Ao anatin'ilay lahatsary mahabe resaka, ireo olona rehetra nanatrika [ilay fety] samy ravoravo, faly, ary feno tsiky hita eo amin'ny fàfana — isan'izany Ing. Konstantin Fedotov. Hita mazava ho tena ao anaty hafaliana tsotra izy. Sarotra ho an'ny birao miadidy ny famoahana ato aminay ny hanao tsoa-kevitra hoe ” ny fanapariahana io lahatsary io dia navoaka nifanohitra tamin'ny sitrapon” ireo mpandray anjara feno hafaliana ireo.
Tsy voarara ao anatin'ny Federasiona Rosiana ilay hira nandihizan'Ing. Fedotov — Livin la Vida Loca hirain'i Ricky Martin. Tsy naneho antso na ezaka hafa hihantsiana fihenjanana ara-pko sy saranga Ing. Fedotov.
Noraketina nandritra ny fety iray natao tao amin'ny tranon'ny orinasa iray an'ny fiadidiana ny tanàna ao an-toerana ilay fety, izay i Fedotov ihany koa no tale ao. Ny 12 Septambra izy io no nakarina tao amin'ny YouTube.
Talohan'ny nandalovany tany amin'ny biraon'ny polisy ao an-toerana, nandraman'i Fedotov ny nandresy lahatra ireo mpanivana federaly mba hibahana ny mpampiasa aterineto tsy ho afaka hanaparitaka ilay lahatsary YouTube. Tsy nahomby io ezaka nataony voalohany io.
Tsy vao sambany izao no nisy Rosiana iray mpanao politika voaelingelin'ny lahatsarinà dihy noraketina nandritra ny fety iray. Ny Aprily 2011, niporitsaka tety anaty aterineto ny lahatsarin'ny filoha tamin'izany fotoana, Dmitry Medvedev, nahitàna ity mpitondra faratampony ity nanofahofa ny tànany sy nidoladola toy ny vehivavy tamin'ilay hira “American Boy” nohirain'ilay tarika pop Rosiana “Kombinatsia”.
Nanampy nanimba ny endrik'i Medvedev teny anivon'ny vahoaka ilay lahatsary noheverina ho tsy misy tsiny (tsy zavatra manahirana akory), ary dia nifarana tao anatin'ny taona iray ny fotoana naha-filoha azy.